के यो अवस्थित छ वा "यौन अनुष्ठान बाल दुर्व्यवहार र बाल बलिदान" होइन? मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर [AIVD अलार्म], समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	29 अगस्ट 2017 मा	• 27 टिप्पणिहरु
एक सानो गलतफहमी हटाइनु पर्छ। जब म भन्छु कि रोनाल्ड बर्नार्ड एक अभिनेता हो जसले एनएलपी प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ जसले मानिसहरूलाई ब्लिज बैंकका सदस्यहरुलाई समेट्न सक्दछ जुन एक सम्भावनाको लागी अपील गर्दछ, यसको मतलब यो होइन कि यौन अनुष्ठान बालबालिकाको दुर्व्यवहार वा बलिदान गर्नुभएन। आउनुहोस्। तथापि, तपाईं केवल 'सीधा ब्लावर' बोल्न सक्नुहुनेछ भने कसैले कठोर प्रमाणको साथ आउँछ। यो क्यारेक्टर मात्र एक कहानी संग आउँछ कि उसले बच्चालाई एक अनुष्ठान प्रदान गर्नुपर्छ। उहाँले तपाईंलाई कथाहरू ल्याउनुहुन्छ र मगरमण्डल आँसूहरू गर्नुभयो। यो ठीक छ र तपाईं यस मुबारक बैंकमा आफ्नो पैसा दिन को लागी अभिनय काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो अझै पनि एक निर्बाध कार्य जस्तो देखिन्छ, जसले आफ्नो विश्वास प्रणालीमा सन्तुष्ट हुन चाहने मानिसहरूको सतावटको दुरुपयोग गर्दछ।
यो एकदम उपयुक्त छ कि यौन बाल दुर्व्यवहार र अनुष्ठान बलिदान हुन्छ। केवल उत्पत्तिबाट मात्र बाइबल कथामा जहाँ अब्राहामले आफ्नो पुत्र 'भगवान' को लागि बलिदान गरेको थियो। र "परमेश्वरले" आफ्नो छोराको "बलिदान" लाई पनि "येशू" बलि चढाउनुभयो, पापको अनुमोदनको लागि पुरानो रक्त बलिदान वार्षिक भेला बलिदान को प्रतिस्थापन गर्न। यो मेरो लागि एक क्रूरता हो कि 'भगवान'! यूकेमा जिमी साइलिइको मुद्दाले पर्याप्त धूल बढेको छ र उच्च स्तरका व्यक्तिहरूले यौन बाल दुर्व्यवहारबारे स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि, यदि तपाईं बैंकिंग प्रणालीको शीर्ष परतहरूमा पैसा परिवर्तनको बारेमा कथाको बारेमा आउनुभयो भने, तपाईंको युवतीमा यौन दुर्व्यवहार र भारतका जीवन्त बालबालिकाबाट अंग चोरीमा तपाईले यसलाई बुरी तुरुन्तै बुलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सबै केहि पनि साबित गर्दछ र केवल मान्छे को पहिले नै विश्वास मा प्रतिक्रिया दिइन्छ। यसैले यो तर्क छ कि यस रोनाल्ड बर्नार्ड को अनमास्किंग एक योजना बनाइयो थियो, ताकि 1x मा स्थापित आदेश स्नान को पानी संग बच्चाहरु लाई फेंक सक्छ र तर्क गर्न सक्छ कि सबै साजिश सिद्धान्तहरु अपूर्ण कल्पना कथाहरु मा आधारित हुन्छन्। मेरो विचारमा, त्यो उद्देश्य यो रोनाल्ड बर्नार्ड सुरु भएको थियो। 'तिनीहरूलाई' गरौं कि ढोकाहरू बाहिर हावा। के तपाईं आफ्नो पालबाट बाहिर हावा पाउन 'तिनीहरूलाई' मद्दत गर्नुहुन्छ?
कि त्यहाँ केहि व्यक्तिहरु को आनुवंशिक कोड मा कहीं धेरै गलत यौन दुर्व्यवहार को प्रवृत्ति संग केहि गलत छ, धेरै pedophile स्कैंडल्स र बाल अश्लील खोजहरु देखि स्पष्ट हुन सक्छ। भाषामा यस्ता शब्दहरूको परिचय हो, मेरो विचारमा, वैसे पनि अत्यधिक आपत्तिजनक छ। "पेडोफिलिया" को अर्थ "बच्चाको लागि प्रेम।" बालबालिकाको यौन दुर्व्यवहारले बालबालिकालाई प्रेमको साथ केही गर्न सक्दैन। यदि दुई pedophiles आफूलाई एक विवाहित समलैंगिक जोडे को रूप मा प्रस्तुत छ र सोध्छ कि उनि गोद लेने को प्रक्रिया को समयमा बच्चाहरु लाई प्यार गर्छन, त जवाफ अनुमान अनुमान गर्न सकिन्छ। शब्द 'बाल पोर्न' पनि एक भयानक भाषाई गल्ती हो। यसले 'अश्लील' चिन्ता गर्दैन; यसले 'यौन दुरुपयोग' चिन्ता गर्दछ। यसमा खुशीको कुनै तत्व छैन। तर पशुपक्षी घटनाको अस्तित्व जुन मानिसहरूले यौन दुर्व्यवहार गर्दछन् सिद्ध तथ्य हो। उदाहरणका लागि, पहिलो चैंबर सेन्टर एडवर्ड ब्रन्गेरर्समा उनको घर थियो 'यौन बाल दुरुपयोग चलचित्रहरू'। नीदरल्याण्डमा वैकल्पिक मीडियाले हामीले किन कहिल्यै देखेका छैनौं? केवल यो जाँच गर्ने एकमात्र एउटा अन्डरस्टेड थियो। नीदरल्याण्डका वैकल्पिक मीडिया किन कहिल्यै बुझ्न सकेन कि ब्रोंगर्सामाको यौन दुर्व्यवहार चलचित्रहरू अहिले Rutgers WPF को स्वामित्वमा छन्, एउटै सरकारी-सब्सिडी आधार हो जसले अब प्राथमिक स्कूलहरूमा बच्चाहरूलाई सिकाउँछ कि 'तपाईंको लिंग छनौट छ'।
नेदरल्यान्डमा रहेका वैकल्पिक विकल्पहरू उनीहरूको आँखाबाट शर्मिंदा हुनुपर्दछ कि तिनीहरू केवल 'मेरो बिहेबाट टाढा' वा 'राम्रो महसुस' समस्याहरूको सबै प्रकारका साथ मात्र विचलित हुन्छन् र कंक्रीट तथ्याङ्कहरू कहिल्यै नबनाउँदैनन्। वर्षको लागि मिका कटको पछि सम्पूर्ण वैकल्पिक मिडियाले नीदरल्याण्डको पछि लागे; जसले बाल यौन दुर्व्यवहारको जोरिस डेमिनको आरोप लगायो (म शब्द 'pedophilia' प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्दछ)। केही साबित भएन र धेरै प्रमाणहरू मात्र बनाइयो (जस्तै थाइल्याण्डमा एक पत्रकारको मृत्यु जसले कथित रूपमा "डेमलिङ्कका दलहरू" मा मारिएको थियो)। नेदरल्यान्ड्समा वैकल्पिक मिडियाले अन्धा काटिएको अनौठो कथाहरूको पछि लागे। कुनै पनि थाहा थिएन कि क्याट एक व्यक्ति संग सहयोग को लागी पहिले नै अमेरिका मा अधिकृत बच्चा दुर्व्यवहार फाइलहरु को विष्फोट को लागि दोषी ठहराया थियो: जैक एब्रमोफ। किन वैकल्पिक मीडियाले मिरा काटाको कब्रको बारेमा चुप लाग्दो थियो? किनकि तिनीहरू सबै दृश्यको पछि त्यही मालिकको सेवा गर्छन्। त्यसैले तपाईंले नीदरल्याण्डमा गम्भीर वैकल्पिक मिडियाको कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने यदि उनी आध्यात्मिक भावना, असल समस्याहरू, यूएफओहरू, क्याप्सन विषाक्तिकरण, 911 वा "सीमाना" बोल्ने व्यक्तिलाई मात्र बिना साक्ष्यमा ध्यान दिन्छन्। त्यहाँ खोजी गर्न र नीदरल्याण्डमा साबित गर्न पर्याप्त छ, तर नकली वैकल्पिक मिडियाले कथा कथाहरू र मीका कट-जस्तै अनावश्यक लुगा जस्तै मिडिया एटका कथाहरू बताउँछ। Martijn वैन Staveren जस्तै नयाँ गुरु को पादरी को मान्यतापूर्ण बूथ को लागि एक नयाँ प्रेरणा दिन को लागि र "सशक्त दिल" दासहरु लाई केवल अर्को दिन काम गर्न को लागि फिर्ता जान्छ।
यो वास्तविक जागरणको लागि समय हो र यो जागरण हो कि तपाईं मात्र मुख्यधारा मीडिया द्वारा खेल्न नसक्ने हो, तर वैकल्पिक मिडियाले धेरै र धेरै नै परिष्कृत र धेरै परिष्कृत हुन्छ। के यो मतलब छ कि वैकल्पिक मीडियामा लेखिएको के बीच राम्रो चीजहरू छैनन्? निस्सन्देह तिनीहरू नियमित रूपमा 95% सत्यलाई बताउँछन्, तर तिनीहरूले आफ्नो मालिक जहाँ तपाइँलाई हेर्न चाहने ध्यान केन्द्रित गर्दछ। साइटमा यहाँ उल्लेख गरिएका कुराहरू नदेखाउनुहोस्, उदाहरणका लागि। यी मध्ये कुनै साइटले तपाईंलाई मीका क्याटको झूट बोल्छ? के ती मध्ये कुनै साइटले तपाइँलाई Rutgers WPF द्वारा स्वामित्व गरिएका यौन दुर्व्यवहार चलचित्रहरूमा संकेत गर्दछ? रोमनल्ड बर्नार्ड जस्तै कुनै अभिनेता को बारे मा महत्वपूर्ण हुनेछ? के कसैले आईसीटीटीएसको बारेमा एक महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्छ? के कसैले तपाईंलाई दृश्यमा vloggersrel राख्ने कसरी पोन्टेन्ट सर्तमा देखाउँछ? के कसैलाई तपाइँले कसरी देखाउँछन् मुख्य स्ट्रीम मेडियाले एटिफा प्रदर्शन र सम्बद्ध दण्डहरू विरुद्ध पेघालाई पूर्ण रूपमा कसरी सेट गर्छ? म चल्न सक्दिनँ, तर तपाईं कारको चित्रकलामा खरोंचको साथ मिठो राख्ने वैकल्पिक मिडियाको बारेमा, तपाईलाई दोषपूर्ण इञ्जिनको सम्झना गराउनुपर्दछ। यहाँ र अहिले र वर्तमानमा, तपाईं स्टेज गरिएका समाचारहरूको साथ मिडिया द्वारा अभिवृद्धि गरिनेछ। र हामी अब यो जान्दछ कि यो वैकल्पिक मिडिया मा पनि हुन्छ, अब यो स्पष्ट छ कि रोनाल्ड बर्नार्ड एक अभिनेता हो। र तपाई केवल ती विश्वसनीय वेबसाइटहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, किनकी तपाईं यो वर्षको लागि यो गर्न प्रयोग गरिरहनुभएको छ? यदि तपाईंले पत्ता लगाउनुभयो भने तपाईंको दाई वर्षको लागि तपाईंलाई आदेश दिइयो। विश्वमा पेटी दिनुहोस् र यसलाई तपाईंको घरमा फेरि छोड्नुहोस्, किनकि त्यो धेरै मीठो छ र यसको अर्थ पनि होइन? सायद तपाई साँच्चै उठ्नु पर्छ र तपाईलाई मिठो राख्नुभएका साइटहरूमा अलविदा भन्न सक्नुहुन्छ तर कहिल्यै प्रमाणको साथ कहिल्यै नबिर्सनुहोस्।
निम्न desinfo एजेन्टहरु जस्तै Arjan बोस्ट ओभर माट्स, जो फ्लोटिंग सपना कहानियों संग सत्य को मिश्रण मा, वैकल्पिक मीडिया को एक बुरा नाम दे। उस्तै लोकप्रिय ज्ञात साइटहरू जस्तै चाहना चाहियो जुनटोओन, नाइनक्सन्यूक्सन्यूज, ग्वून-नेइसेक र सबै ती साइटहरू जुन अनियमित रूपमा रोनाल्ड बर्नार्ड, मार्टिजेन व्यान स्टेभेनन, Kevin Anett र धेरै अन्यहरूमाथि लिन्छन्। तपाईं पनि निश्चित हुन सक्छ कि उनि सजिलै संग जानकारी को हेगफ्रेज बताउछन र तपाईंलाई आफु को फिल्टर को बाहिर फिल्टर गर्न को लागी छ, तर त तपाईं जादुई को लागि एकदम धेरै मीठा हुन सक्छ जो तपाईंको ध्यान को भ्रामक छ। आफ्नो टाउको बलियो बनाउनुहोस् र साँच्चै जगाओ! वैकल्पिक मिडिया नेदरल्यान्ड्स निश्चित रूपमा लेखिएको छ। उदाहरणका लागि, अकजसो बोस्नले भिडियोमा कत्तिको बेकारमा राम्रो नदेख्नुहोस्! सत्यको साथ बकवास मिलाउनु त्यो वैकल्पिक मिडियाको खेल हो। खराब कुरा भनेको धेरै राम्रो जानकारी सीधे मार्टिन भेरिजल्याण्डको साइटबाट आउँछ र कल्डर-ब्लेंडरमा फेंकिएको छ। उहाँ मात्र होइन। जागो! AIVD ले तपाईंलाई बर्षको लागि खेलेको छ र जबसम्म तपाइँ यी साइटहरू भ्रमण गर्न जारी राख्नुहुन्छ तपाईं खेल्नु जारी रहनेछ।
ट्याग: डाली, वैकल्पिक मिडिया, Arjan Bos, desinfo, पृथ्वीको विवाद, विशेष, प्रस्ताव, pedophilia, रौतहट, रोनाल्ड बर्नार्ड, satanic, यौन बाल दुरुपयोग
29 अगस्ट 2017 मा 13: 39
राम्रो छ वा !!! छोराछोरी (र वयस्कों पनि) संग बच्चाहरु को दुरुपयोग, हत्या र हत्यारहेछ तर अन्ततः कम्तीमा शैतानिक (शैतानिक) अन्धकार (जुन मैले बोलाइदिन्छु) मात्र शुद्ध र उदासीन बलिदान र अन्य भ्रामक अनुष्ठान !!!
कुल मनोविज्ञानको लागि उदासीन मजा संगै, यो शासकहरु, आगामी राजनेताहरु लाई सशक्त बनाउन पनि गर्दछ। तपाईलाई थाहा छ कि कसरी ब्ल्याकमेल गर्न र कपमा जान, जहाँ उनी आफैले रद्द नगरी कहिल्यै बाहिर आउनेछैन। किनभने जो व्यक्ति वास्तवमै विद्यालयबाट बाहिर निस्केको छ, 'कल होइन तर आज नै मरेको छैन'। सबैभन्दा अनुकूलन मामला हृदयमा आक्रमण (केहि निश्चित औषधिहरूसँग गर्न सकिन्छ) वा नराम्ररी अवस्थामा गोली हाल्छ र यो एक साटानिक अनुष्ठानमा एक अन्तिम पटक भाग लिन सक्छ, तर त्यसपछि (धेरै) प्रत्यक्ष वस्तुको रूपमा।
हामीले स्पष्ट रूपमा पहिचानयोग्य भिडियो प्रकाशित गर्नको लागि पहिलो बहादुर (गोपनीय) सेटिङ्ब्ल्लावर / ताराको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। केवल म डराउँछु यो इन्टरनेट बाट छोटो सम्भावनाको समयमा संवेदना हुनेछ।
तर यो सफल हुनु पर्छ "घर घर" फैलियो, र बस कुनै विज्ञापन मा कुनै पनि छैन।
उदाहरणका लागि, गीसेपेपि जेना द्वारा: धेरैजसो एक पटक यो इस्लामको नाममा धेरै रोमाञ्चक रचना उपन्यास पढ्नुहोस्, र यो केहि सर्कलहरूमा वास्तवमा के हुन्छ भन्ने बारेमा एक ढिलो कुरा हो।
यो केवल रोकिएको हुन सक्छ यदि पावर र प्राधिकरण तुरुन्तै हटाइयो भने, अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिन्छ र एक स्वतन्त्र न्याय प्रणाली (नागरिक-उन्मुख) पेश गरिएको छ र मीडियाले लुगा, ड्रेसिङ, शित र झूठको सट्टा ईमानदार र ईमानदार र रचनात्मक चीजहरू प्रसारण गर्दछ। प्रचार कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।
अन्तमा, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी सबैलाई आफ्नै र आफ्नो लोभ, लोभ र आत्म-सम्मानित मित्रहरूलाई बुझेको छ!
तर यो केवल हजारौं विकास पछि मात्र प्राप्त हुनेछ यदि हामी यहाँ यस सुन्दर ग्रह पृथ्वी (र यसको आसपास विश्वव्यापी र ठुलो सिर जस्तो छैन कि पृथ्वी समतल हुनेछ र प्रचारका साथ फैलाउन दिमागहरु जस्तै) आफैलाई बर्बाद गर्दैनौं। छ।
29 अगस्ट 2017 मा 14: 34
धेरै छिटो छैन।
तपाईंको पहिलो अनुच्छेदमा तपाई तुरुन्तै सबै प्रकारको चीजहरू फ्याँक्नुहुन्छ।
"बाल दुर्व्यवहार, हत्या र मानिसहरूको बीच हंसी" र त्यसपछि अचानक
"शैतानिक, शैतान, छोराछोरी (र वयस्कहरू पनि) संग अनौपचारिक विशुद्ध उदास बलि र अन्य भ्रामक अनुष्ठानहरू अवस्थित छन्।"
त्यसैले म त्यो अन्तिम एक अप किन्न चाहन्न। (त्यसोभए पछि)
के ती तथ्याङ्कहरू छन् र यदि हो भने तपाईं कसरी जान्नुहुन्छ?
शायद बस एक स्रोत को उल्लेख गर्नुहोस कि साबित गर्न को लागी संभव छ।
त्यसैले कुनै एरिजोना वाइल्डर्स, टोओस निजेनहुइ, र हम्पस्टेड बर्गरहरू किनभने यो पहिले नै साइएस-ओप्स / होक्सेस साबित भएका छन्।
अन्यथा, यो3व्यापारमा नयाँ अनुसन्धान गरेर फेरि रिसेट गर्नुहोस् र त्यसोभए, 'विश्वास गर्न इच्छुक' को मानसिकता प्रयोग गर्नुको सट्टा, प्रमाणको लागि विशुद्ध खोज्नुहोस्।
मैले शैतानिक अनुयायी बाल बलिदानको कुनै प्रमाण देखेको छु।
वैसे, म नीदरल्याण्ड मा पहिलो साजिश थियो कि एहसास गर्न को लागि हम्पस्ड एक चकित थियो।
स्पष्ट रूपमा सोच्न जारी राख्नु र उल्लेखनीय किरणहरूमा ध्यान दिँदै।
मैले पनि समयको डोनक्जिजोटको साइटमा जवाफ दिएँ, र यो टोकरीमा आइपुग्यो किनकि यसले जोरजस्ती गर्यो कि यो सबै वास्तविक थियो र उनीहरूले उनीहरूलाई गर्भधारणका सन्तानलाई सम्बोधन गरे कि सबै कुरा झगडा भएको थियो।
समेत मार्टिनले केहि समयको लागि संज्ञानात्मक असन्तुष्टको सामना गरे।
र धेरै द्वारा यसो भनिएको थियो कि satanic अनुष्ठानहरू गरे।
त्यसैले मैले अस्वीकार वा पुष्टि गर्न सकेन किनभने मलाई थाहा छैन।
दुर्भाग्यवश, यूट्यूबका बयानहरूको छविहरू हटाइएका छन् (वा पत्ता लगाउन निकै गाह्रो छ), जो तुरुन्तै YouTube ले मनोविज्ञान र ह्याक्सक्समा भूमिका खेल्छ भनी संकेत गर्दछ।
आज पनि डिनिफोन्सन साइटहरूले अझै पनि यूट्यूब भिडियोहरू मार्फत उपन्यास ह्याम्पस्टेड मुद्दालाई संकेत गर्दछ (जहाँ हलिबर्गरमा लगाउने बालबालिकाहरू प्रयोग गरिनेछ)
तर दुई बच्चाहरूको बयानको भिडियो अब फेला पार्न सकिँदैन।
29 अगस्ट 2017 मा 21: 47
@ClairVoyance निश्चित रूप देखि तपाईं सशक्त र पत्ता लगाउन गाह्रो हुनुहुन्छ।
तपाईंले किन सोच्नुभयो? निस्सन्देहहरू यसका साथ बिक्रीका लागि होइनन् र त्यो तहको बन्दोबस्त (बाल दुर्व्यवहारहरू) दुखाइमा अत्यन्तै बन्द छ, त्यसैले धेरै सरल।
मेरो धारणा छ कि यो साँच्चै उत्पन्न हुन्छ 'प्रेरणा' (= विशेषबाट सामान्य देखि भेदभाव) र 'सामान्य अर्थ' को आधार मा केहि लगभग ज्ञात ज्ञात मामलाहरु को अतिरिक्त।
म यहाँ डट्रोक्सको मामला मात्र उल्लेख गर्दछु र विशेष गरी गवाहहरूको गवाह बयानहरू, नन्सस्पेसको राउण्ड हाउस र ब्ल्याक इन्टरनेटमा बच्चाहरू संग धेरै स्फ चलचित्रहरू। पछिको अस्तित्व संदेहमा छ, तर म निश्चित रूपमा अन्य मामिलामा शङ्का गर्दिनँ, केवल डेमकिङ्क, वैटर आदि आदिको बारेमा सोच्न सक्नुहुनेछ।
र 1905 को आसपास सम्म XSUMX सम्म राम्रो बोल्सेविक्स लाल आतंक को बारे मा कुरा गरदैन, जसमा हजारौं नहीं, लाखों नहीं, लाखौं मान्छेहरु, पुरुषहरु, महिलाहरु र बच्चाहरु को पीछा गरेर सबै भन्दा राम्रो तरीकाहरु मा पीछा गरिएको छ। महिलाहरु र बच्चाहरु दुर्व्यवहारको साथमा हिंसा र मारिएका छन्। यद्यपि यहाँ यहाँ सिथानिक अनुष्ठानको हत्यारा सीधा थिएन, तर त्यहाँ र धार्मिक र सांस्कृतिक भिन्नताहरू बाहेक - जहाँसम्म मलाई चिन्ता छ - चुनौती र निष्पादनमा कुनै फरक छैन।
निश्चित रूपमा 'उच्च' (पढ्ने भन्दा कम पढ्ने) भन्दा बढी सर्कलहरूमा यो केही 'बढी परिमार्जित' र कम ठूलो जान्छ, तर यो ठीक छ यी उच्च सर्कलहरू संसारको लगभग सबै युद्धका लागि जिम्मेवार छन्।
30 अगस्ट 2017 मा 04: 25
म satanic अनुष्ठान बाल दुरुपयोग र बाल बलिदान बारेमा कुरा गरिरहेको थियो।
मैले त्यो "हार्ड प्रमाण" खोज्न गाह्रो छैन भन्न सकेन।
मैले भर्खरै भनेँ कि मैले कुनै प्रमाण देखेको छु।
म कहिल्यै कहिल्यै मतलब छैन।
र 'कुनै' मेरो 1 को अर्थ हो।
30 अगस्ट 2017 मा 10: 41
Clairvoyance म बस भन्न चाहन्छु कि तपाइँ मेरो प्रतिक्रियाको जवाफमा "अनुच्छेद" शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ।
म तपाईंसँग मानसिकता र एक विङ्कको साथ अर्थ हो, तर अर्को मामलामा - यदि सानो छ - तपाईले मेरो व्यवहार र मेरो सम्मानको साथ मेरो प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ।
म सधैं यो भन्छु: एक सानो अनुच्छेद पनि अनुच्छेद हो। ।
29 अगस्ट 2017 मा 15: 06
Belinda McKenzie र Sabine McNeil हम्पस्टेहोहोक्स मा प्रमुख खेलाडी थिए।
म्याककेन्की पनि होली हेगग होक्स (बच्चा दुर्व्यवहार) मा एक ड्राइभिङ्ग बल थियो।
पछिल्लो अवस्थामा, पूर्णतया निर्दोष व्यक्तिको जीवन नष्ट भयो, भ्रामक (पढ्ने ब्रेकविश) साजिशकर्ताहरूलाई फ्याँकिएको र ती निर्दोषहरूलाई बेन्च गर्न चाहन्थे।
30 अगस्ट 2017 मा 10: 56
ClairVoyance अचानक SRA होक्स र अन्य hoaxes बाट, केवल सांख्यिकीय कारणहरु र तथ्य यो कि हामी यस पृथ्वी पृथ्वी मा 7,5 अरब homosapiens ace संग एक साथ 'जी' एक भाग आक्रामक गहिरो सामूहिक र अवचेतन रूपमा दुष्ट (cf. जंग) प्रजातिको साथ चिन्ता (प्रजातिहरु) को चिम्पाजहरु र यसको लागि अर्को भाग एक प्रकारको शेष बोनोओोसबाट एक दयालु मनपर्दो राम्रो गेटमिन्सेनलाई पनि उल्लेख गरिएको छ, जुन पुनरुत्थान गर्न र छुट्टीमा जान चाहन्छन्। लट्टो आदिमा भाग लिनुहोस्, त्यसपछि तपाई बुझ्दछु कि मेरो लागि मौका छ कि SRA र अन्य भयानक चीजहरू उत्पन्न भयो 99,9999% तर 100% छैन!
सानो तर चौंकात्मक व्याकरण त्रुटिहरू (राम्रो डच गल्तीहरूमा) क्षमा गर्नुहोस्।
एनबी ह्याम्पस्ट्रेड र अन्य होकसहरू वा वास्तविक दुर्व्यवहारबाट ध्यान हटाउन डिपि सूचनाको रूपमा परिसंचरणमा राखिनेछन्। जिमी सविल, प्रिंस चार्ल्स, आईडी बर्नार्ड (हाहा 🙂 🙂 रोनाल्ड बर्नार्डले यसलाई रोनाल्ड ब्यानर्ड भनिन्छ), डुट्रॉक्स, जोरिस डेमिकिन, मारियन वाइनस्ट्रा, नुलडेकी केटी; वास्तवमा सबै भयो। शुद्ध होस्ट सही?
30 अगस्ट 2017 मा 11: 18
आशा गर्नुहोस् कि तपाईं 1 मा सबै आशा गर्नुहुन्छ।
30 अगस्ट 2017 मा 11: 50
अर्को इमानदार टिप्पणी तपाईं। तपाईंले आफ्नो नामको सम्मान गर्नुहुन्न, अन्यथा तपाईंलाई कुनै तर्क वा प्रमाण आवश्यक पर्दैन। Clairvoyant right? (म यस साइट मा तपाईंको रवैया यहाँ संदेह गर्न शुरू गर्दै हुनुहुन्छ)
1 आशामा सबै कुरा। वास्तवमा, पछि सबै चीजहरू सबैसँग जोडिएको छ! त्यो हिलोवाद भनिन्छ।
तपाईंलाई थाहा छ, ठीक छ?
30 अगस्ट 2017 मा 12: 13
म सबै कुरा स्पष्ट रूपमा हाँ देख्दछु। त्यो सही छ।
मलाई माफ गर्नुहोस्। म सधै त्यो बाटो भएको छु र म सधैं त्यहि तरिकामा रहनेछु।
30 अगस्ट 2017 मा 12: 10
सबैको सम्मान सम्बन्धी नोटिसको साथ, तर तपाईले मलाई धेरै शब्दहरूको साथ मजाक गर्नुहुनेछ।
र त्यो जादू तिमी साँच्चै राम्रो हो। यसको लागि आदर !!
तर म तपाईंको सबै शब्दहरु लाई साबित गर्न को लागि धेरै ऊर्जा बर्बाद नहीं जा रहयो हूँ।
तपाईंले केहि मिनेटमा आधा अनुच्छेदमा राख्नुभयो, मलाई एक दिनको लागी लिन्छ।
यो तपाईं कसरी समाप्त हुनुभयो: जिमी साइलिले, प्रिंस चार्ल्स, रोनाल्ड बर्नार्ड, डट्रोक्स, जोरिस डेमिकिन, मारियन वाइनस्ट्रा, नुलडेकी केटी: केहि पनि भयो। शुद्ध चकमा सही? "
जब मैले सोधे कि हामी शैतानिक अनुष्ठान बाल दुरुपयोग को बारे मा कुरा गरें।
यसबाहेक, तपाईं कुनै पनि हिचकिचाहटमा परी टेलिभिजन र बैंकर रोनाल्ड बर्नार्डलाई उल्लेख गर्नुहुन्छ, त्यो सूचीमा।
29 अगस्ट 2017 मा 16: 05
खैर, शायद मेरो भाग मा बेवकूफ हो रही हो। यो एक राम्रो लेख हो। यो एक दया छ कि भेडा, एक उपभोक्ता जस्तै, अवसरवादी छ
र जानकारी गणना कि भेडा आयो।
29 अगस्ट 2017 मा 20: 20
यो टाउको दुख्नको लागी ट्रलहरूले ओभरटाइम कसरी काम गर्ने भनेर हेर्नको लागि। मलाई यस महिला (निका केइली) संग एक व्यक्तिगत कुराकानी भएको थियो कि मैले कहिल्यै सुनेको छु। मैले मेरो ई-मेल इनबक्स जाँच गरेको छु, तर मैले कुनै ईमेल परिवर्तनहरू देख्न सकिनँ र म वास्तवमा व्यक्तिगत वार्तालाप सम्झन सक्दिन।
यहाँ लिङ्क: https://www.facebook.com/ronald.b.blij
29 अगस्ट 2017 मा 20: 31
संयोगवश, म उदाहरणका लागि डेभीड आईकेईको रूपमा लाग्ने व्यक्तिहरूको नक्कली ईमेल ठेगानाबाट इमेलहरूसँग उल्टाइएको छ (तलका उदाहरणहरू हेर्नुहोस्)। त्यसोभए तपाईं पनि भरोसा ई-मेल अन्धामा राख्न सक्नुहुन्न। म कल्पना गर्न सक्छु कि त्यहाँ मानिसहरू पनि हुन् जुन मलाई हुन लागेका छन् र मलाई नियन्त्रणमा रहन मानिसहरूको इमेल पठाउँदछ। यो crazier प्राप्त गर्दैछ। वास्तवमा, यो सबै दंडनीय छ, तर मेरो घोषणाहरु दिन को लम्बाई को लागि अपरिवर्तित समाप्त हुन्छ।
29 अगस्ट 2017 मा 20: 55
कि तपाइँ ती टोलहरू तपाईंलाई पछि पछाडि राख्नुहुन्छ, र अहिले हामी वास्तवमा नकली खाता मार्फत तपाइँलाई प्रशंसा गर्दै छौं। यदि तपाईंले लेख्नुभयो भने सत्य थिएन, तपाईंले तिनीहरूको ध्यान प्राप्त गर्नुभएन।
ठीक छ, यो पछि को छ। मालिकहरू दुर्व्यवहार र धोका, बाबेलोनियर।
29 अगस्ट 2017 मा 21: 15
पनि यहाँ (को फेसबुक लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्) रोनाल्ड बी खुसी एनएलपी द्वारा फोटो पोस्ट यसलाई थिए दागरहित बनाइन्छन् शब्दहरू भने एक एङ्कर (वा सम्झौता) को अवचेतन संकेत अर्को चाल छ। मैले भर्खरै एक प्रेमी बनाएको छु:
29 अगस्ट 2017 मा 22: 08
हा हा रोनाल्ड बर्नार्डले प्रिंस रोनाल्डलाई फोन गरे,
जन हेउभलेमन लेखे:
30 अगस्ट 2017 मा 07: 44
शैतानका उपासकहरू केवल एक साथ आउन सक्छन् र उनीहरूको काम गर्छन्, आजकल अनुमति दिईन्छ।
'धर्मको स्वतन्त्रता' अन्तर्गत पर्दछ।
तिनीहरू आफैले भन्छन् कि तिनीहरूले राम्रो बरु बुरी चाहन्छन्।
र यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तिनीहरू ती दृश्यहरू के गर्दै छन् के साथ यति खराब छैन, त्यसो भए तपाईंसँग साँच्चै कुनै मानव ज्ञान छैन।
अनुष्ठान बाल बलिदान लगभग पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिएको छ, गर्भपात हत्या गर्ने घरहरू हेर्नुहोस्,
तपाईलाई अझ धेरै प्रमाण चाहिन्छ!
30 अगस्ट 2017 मा 10: 11
त्यो राम्रो छ, तर यो प्रमाणित गर्दैन कि रोनाल्ड बर्नार्डले पनि यसको अनुभव गरे।
उनको संचालक आँसु र एनएलपी प्रविधिहरु लाई मुख्य रूप देखि पुष्टि गर्दछ कि उनले आफ्नो नयाँ मुबारक सोफे को दर्शक को आकर्षित गर्न को लागी विषय को उपयोग गर्दछ।
30 अगस्ट 2017 मा 08: 48
पशुहरूको लागि डिजाइन गरिएको म्याट्रिक्स (मानव बगाल) satanic कम्पनी द्वारा चकित छ जसको मुखपृष्ठको मनोविज्ञान छ। पिरामिड-दास मोडेल जसमा मानिसहरूले पक्राउ राख्छन् र जसमा मानिसहरू वास्तविकताबाट 'abracadabra' (अक्षरहरू र संख्याहरू) द्वारा राखिएको छ, मेरो विचारमा, एक महान भक्ति अनुष्ठान, मौतको अपराधी। हामी साक्षी देखिरहेका छौं कि ती मस्जिदहरू एक बेहोश, दिमागमा बिशेष जनलाई मूर्ख बनाइरहन्छन् र जसमा 24 /7प्रयोगहरू विचलित हुन्छन् र खेल खेल्न सकिन्छ।
30 अगस्ट 2017 मा 11: 05
केहि पुरानो केक यहाँ!
यहाँ पेडोफाइल बिलियनियन जेफरी एपिस्टीनको सानो कालो बुक हो
यसमा दायर गरिएको: जेफ्रे एपिस्टीन
30 अगस्ट 2017 मा 11: 07
सायद एक चोटी पनि! धेरै कालो भागहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोस्।
30 अगस्ट 2017 मा 11: 19
यसका लागि यो संसारमा SRK (एसआरए) छैन जस्तो लाग्छ कि त्यहाँ युद्ध र कुनै युद्ध अपराध छैन।
यो ध्यान दिनुहोस कि अहिले सीरिया, इराक र अफगानिस्तान र संसारमा धेरै अन्य ठाउँहरूमा जेनेभा कन्वेंशन सम्बन्धी सबै नियमहरू छन्, मानव अधिकारलाई अन्तिम युद्ध अपराधको उल्लङ्घन गरिरहेको छ। दुर्भाग्यवश, मास मिडिया (टिभी र अखबार) ले यो मा कुनै उल्लेख छैन र विद्रोही प्रचार रोशनी र आबादी को बाहेक, खरीदारहरु र शत्रुहरु द्वारा प्रभुत्व। जनसंख्या, तिनीहरू सुत्छन्।
30 अगस्ट 2017 मा 20: 58
नोटिस, सबै सम्मान संग, तर तपाईं मेरो शब्द विकृत गर्दै हुनुहुन्छ।
मैले कहिल्यै भनें कि शैतानिक अनुष्ठान बाल दुर्व्यवहार अवस्थित छैन।
म बस भन्दैछु कि मैले कुनै प्रमाण देखेको छु।
धेरै साबित भयो। र चाहे ती चकलेटहरू केहि चीजहरूको लागि आवरण-अपहरू हुन् जुन वास्तवमा अवस्थित छ वा चाहे उनी फरक फरक उद्देश्यसँग मनोचिकित्सक हुन्छन्, म पनि निश्चित गर्न सक्दिन। यद्यपि मलाई मेरो संदेह छ। म अहिले ती संदेहहरूलाई हेलिकप्टरमा जाँदैछु किनभने यो धेरै जटिल कुरा हो।
निस्सन्देह मलाई एपिस्टीनको सानो कालो किताब थाहा छ।
मलाई मेरो क्लासिक्स थाहा छ।
Epsteins द्वारा आयोजित कमराज व्हाइट्स संग अंगहरु, प्रिंस एन्ड्रयू को उनको स्पष्ट रूप देखि - कम उमेरकी प्रेमिका / वेश्या / सुनने वाला डाइगर को फोटो।
आउनुहोस् ती ती अभिव्यक्तिहरू ती नामका अभिजात वर्ग APPLE।
र चलो SRK PEREN लाई कल गर्नुहोस्।
यस अर्थमा तपाईं नाशपातीहरू संग स्याउको तुलना गर्नुहुन्छ।
30 अगस्ट 2017 मा 21: 31
दुष्टले तपाईंको क्यारियर र जीवन खर्च गर्न सक्छ। संसदमा यो मुद्दा उठाउन चाहने व्यक्तिले बेल्जियम लरेन्ट लुईन्, जसले पछि ठूलो दबाबमा इस्तीफा दिए, किनभने तिनले जूली र मेलिसाबाट गोपनीय स्वतन्त्रता रिपोर्टहरू उद्धृत गरे र प्रहरीले पेडो डेरिगोबाट रिपोर्टहरू प्रकट गर्न खोजे। र त्यो देशमा ईयूको राजनैतिक राजधानीको घर छ। ब्रसेल्स को बीच मा विचित्र र मैकबेर मूरल्स को अतिरिक्त:
31 अगस्ट 2017 मा 06: 01
चाहे "स्नफ भिडियो र शैतानिज्म" सीरीज साबित हुन्छ कि वास्तवमा यो बालबालिकाको दुर्व्यवहारको वास्तवमा संगठित भएको छ कि वास्तवमा RSK (शैतानिक अनुष्ठान बाल दुर्व्यवहार), म निश्चितसँग भन्न चाहँदैनन्।
नाओमी वा नोमेईको साथमा यी साक्षात्कारको अचम्मलाग्दो भाग (जुन केटीको ठूलो बन्डल) होईन - त्यो सिधा अगाडी हेर्न को लागी - आँखाका साथ मुख्य रूपमा शीर्ष माथि - बाँयामा दर्शकको सामने। ।
त्यसोभए तपाई फेरि कथामा शंका गर्न शुरु गर्नुहुन्छ।
वा यो सम्भव छ कि शरीरको भाषा पढ्ने (दर्शकलाई माथि बायाँ आँखा आंदोलनहरूको लागि) मात्र झूठको संकेत हो जब यसले हामीलाई सूट गर्दछ।
या यो नाओमी हो कि यसैले उनको आँखा आंदोलनहरु को वरपर अन्य तरिका मा काम गर्दछ, या भिडियो को दर्पण छ?
10 सेप्टेम्बर 2017 मा 12: 45
@notis, म खुसी छु तपाईं खुसी छु।
म उत्सुकतापूर्वक शैतानिक अनुष्ठान बाल दुर्व्यवहारको प्रमाण को खोजी गर्दै थिए। म आफैलाई भोग्नुमा कुनै समस्या छैन, किनभने मेरो अहंकारले मेरो बाटोमा पाउँदैन। सत्य अझ महत्त्वपूर्ण छ।
जब मैले माथिल्लो भिडियो फेरि फेला पारेको छु, मैले सोधे कि म खेलमा उपशासन थियो, तर मैले वर्षको लागि भिडियो हेर्दा, मैले मेरो शंका पाए कि गवाह सत्यलाई बताइरहेको थियो।
मैले अचानक दिमाग नियन्त्रण, नील स्यान्डर्सको क्षेत्रमा एक विशेषज्ञलाई सम्झना गरें।
मलाई लाग्छ ईमानदार हुनुहुन्छ र यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
मलाई लाग्छ कि उसले केहि सीटब्ल्लावरहरूको बारेमा केहि गलत गल्ती गर्दछ
एरिजोना विल्डर। तैपनि, निम्न साक्षात्कार मेरो लागी रोचक लाग्छ।
मलाई लाग्छ कि शैतान / म्यानुअल सेटको चर्चबाट माइकल अकिनले अमेरिकी सेना भित्र मन दिमागी कार्यक्रमहरूमा समावेश गरेको बलियो संकेतहरू छन्।
यसले 'एमके-अल्ट्रा' माचुरियन उम्मेदवारहरू सिर्जना गर्न साईटिक अनुष्ठान दुरुपयोग संकेत गर्न सक्दछ।
मलाई थाहा छैन कि साईटिक अनुष्ठान दुर्व्यवहार इलेक्ट्रोशक्स भन्दा लक्षित लक्ष्य हासिल गर्न को लागी अधिक प्रभावकारी हुनेछ (सार्क-आधारित दिमागी नियन्त्रण, घनिष्ठ पहिचान)।
वैसे पनि, निम्न भिडियोमा साक्षात्कार मेरो लागि मूल्यवान देखिन्छ। र नीलसन्डर्स वेबसाइटमा थप हेर्नुहोस्।
« रोनाल्ड बर्नार्ड अवरोध र साजिश सिद्धान्तहरु को नियंत्रण विध्वंस
भाषण, किताबहरू, संगीत, चलचित्रहरू, खेलहरू र इन्टरनेट: भाषाहरूको घातक बाबिलियन भ्रम? »
कुल भ्रमण: 2.470.951